အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ကျွန်တော်နှင့် ပျောက်ဆုံးသွားသော နံရိုးတစ်ချောင်း
ကျွန်တော်နှင့် ပျောက်ဆုံးသွားသော နံရိုးတစ်ချောင်း
၁။ အာဒံရဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားသော နံရိုးတစ်ချောင်းကို ဧ၀ဆီမှာပြန်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်…
၂။ မင်းနန္ဒာရဲ့ နံရိုးတစ်ချောင်းကိုတော့ သူ့ချစ်သူ ရှင်မွှေးလွန်းဆီက ပြန်ရပါတယ်…
၃။ Juliet ဆီမှာတော့ Romeo ရဲ့ နံရိုးတစ်ချောင်း ရှိခဲ့ပါတယ်…
၄။ ဒါဆို ကျွန်တော့် နံရိုးလေးက ဘယ်မှာလဲ?????
ကျွန်တော့်မှာလည်း နံရိုးတစ်ချောင်းပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ (ကြာဆို မွေးကတည်းက မပါတာပါ)… တစ်နေ့နေ့တော့ တွေ့အောင်ပြန်ရှာမယ်လို့ စိတ်ထဲမှာလည်း ငယ်ငယ်လေး ထဲကစဉ်းစားထားပြီးသားပါ… ဘယ်နေ့လဲ…ဘယ်သူ့ဆီမှာလဲ..ဘယ်နေရာမှာလဲ…ဘယ်အချိန်မှာလဲ ဆိုတာသာ သေသေချာချာ မသိတာပါ… တွေ့အောင်ပြန်ရှာဖို့ကတော့ လုံးဝဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါ….။
အဲဒီ့ နံရိုးလေးသာ ကျွန်တော့မှာရှိရင် အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းမှာပဲလို့ အကြိမ်ကြိမ်တွေးပြီး ပျော်ခဲ့ဖူး ပါတယ်…အဲဒီ့နံရိုးလေးသာ ရှိရင် ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ပိုပြီးပြည့်စုံလာနိုင်တယ်… ကျွန်တော်အင်အား တွေပိုပြီးရှိလာနိုင်တယ်… မျော်လင့်ချက်တွေ ပိုမိုရှင်သန်လာနိုင်တယ်… မနက်ဖြန်တွေ ပိုပြီးလှပလာ နိုင်တယ်…သေချာပါတယ်… ကျွန်တော် အဲဒီ့နံရိုးလေးကို အရမ်းကို လိုချင်မိခဲ့တာတော့ အမှန်ပါဘဲ…။
အမှတ်မထင်ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ နံရိုးလေးကို မနေ့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်မျှော်လင့်ချက်တွေ အားလုံး ပျက်ဆီးသွားခဲ့ရပါ တယ်… ကျွန်တော့အိပ်မက်တွေ အားလုံး အရောင်လွင့်ခဲ့ရတယ်… ကမ္ဘာမြေဟာ ၂၃ နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်း ဒီဂရီထက် ပိုမိုစောင်းသွားခဲ့တယ်…ကြယ်တွေ ကောင်ကင်ပေါ်ကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် ကြွေကျသွား တယ်…!! ဘာကြောင့်လဲ??? ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ??? ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်နေရမှာမဟုတ်ဖူးလား???
အဖြစ်က ဒီလိုပါ…့ တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်တော့်နံရိုးလေးကို တွေ့ရှိခဲ့တာက အပေါ်ကလူတွေလို ဂန္တ၀င်ဆန်ဆန် မျိုးမဟုတ်ဘဲ… ယမကာမှီဝဲသူများ အတွက်သီးသန့် ဖွင့်လှစ်ထားသော နံရိုးကင်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ရဲ့ မှန်ပုံးလေးထဲမှာ ဖြစ်နေလို့ပါပဲဗျာ….ကျွန်တော့် နံရိုးလေးပေါ်မှာသီးသန့် စာတမ်းလေး တောင်ချိတ်ထားသေးတယ်… “Black Dream” တဲ့…
ဒီတော့မှ ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီ့နံရိုးဆိုင်လေးရဲ့ နာမည်ကိုသေသေချာချာဖတ်မိတယ်… ဆိုင်နာမည်လေးကလဲ လှတယ်ဗျာ… ”နံရိုး ကမ္ဘာ” တဲ့….။ ။
p.s- တွေးမိတွေးရာ တွေးပြီး …ရေးမိရေးရာ ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း…။
Posted by Pyiet Oo Aung at 7:12 AM